Momba anay - Dezhou Dongyu Plastic Packaging Co., Ltd.
Kitapo fampangatsiahana plastika
Miaraka amin'ny fahaiza-manao 20 taona mahery amin'ny polyplastique, manana ny fahalalana sy traikefa izay mahatonga anay ho mpamatsy harona plastika izahay.Miezaka izahay mba hahazoana antoka fa ny vokatra vita amin'ny kitapo poly sy harona plastika dia tsy vitan'ny hoe mahafeno ny filanao fa mihoatra ny andrasanao.Dezhou Dongyu Plastic & Packaging Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana harona plastika isan-karazany.Miaraka amin'ny fitaovana mandroso sy vondron'olona matihanina sy ara-teknika, dia orinasa maoderina mampiditra ny indostria sy ny varotra.Ny orinasa ankehitriny dia manana atrikasa sy trano fanatobiana entana manana velaran-tany 2,000 metatra toradroa ary mpiasa 50-100.Misy milina tsofina sarimihetsika plastika 20, milina mihodinkodina mitohy mihoatra ny 30, milina famehezana sy fanapahana ary milina fanontam-pirinty 10.Mahatratra 4000 taonina ny fahafaha-mamokatra isan-taona.Indrindra indrindra dia mamokatra fepetra isan-karazany ny akanjo akanjo, fisaka kitapo, nanakodia akanjo akanjo, nanakodia fisaka kitapo, mitantana kitapo, mofo kitapo, 20% fihenam-bidy kitapo, biby fiompy kitapo fako, fanary lamban-databatra, ziplock kitapo, sarimihetsika horonana, sns Ny tena tsena fa ny vokatra dia Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eoropa ary Afrika.
Slogan / fahitana / serivisy aorian'ny varotra
Ny teny filamatry ny orinasanay dia hoe: "Ny fahamendrehana no fototra, ny kalitao voalohany". Ny orinasanay dia nanangana rafitra fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra ho an'ny mpiasa. Ny mpiasa manokana dia hijery ny kalitaon'ny vokatra. Ny vokatra tsy manara-penitra rehetra dia raisina ho toy ny vokatra fako. Raha misy vokatra tsy manara-penitra hita taorian'ny nahazoan'ny mpividy ny entana. Manana serivisy aorian'ny varotra izahay. hifampiraharaha sy hamaha.Isaky ny mahazo ny entana ao anatin'ny 30 andro ianao dia hanao fiverenana mitsidika. Izany dia hanova tsara kokoa ny baiko manaraka.
Ny tanjon'ny orinasanay dia ny hanompo tsara ny mpanjifa tsirairay ary hahazo fankasitrahana amin'ny mpanjifa amin'ny kalitao sy ny fahamendrehana.Avy amin'ny mpanjifa mankany amin'ny namana tsara kokoa.
Momba ny serivisy aorian'ny varotra.Rehefa avy namoaka porofo azo itokisana ianao.Hifampiraharaha momba ny fanonerana faran'izay haingana izahay.Tsy manimba ny tombontsoanao.Ary mba hanoratra sy hifanakalo hevitra.Mba hisorohana ny olana miverimberina momba ny kalitaon'ny vokatra.
Enga anie ianao hanome anay fahafahana.
Hampiasa hetsika azo ampiharina izahay mba hilazana aminao fa mety ny misafidy.